Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्रमा बेलायतलाई पछि पार्दै भारत – Emountain TV
काठमाडौं, २६ जेठ । यो वर्ष विश्वकै पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्रमा भारतले बेलायतलाई पछि पार्ने देखिएको छ । २०१५ सम्म जापानलाई पनि पछि पार्दै एसिया–प्रशान्त क्षेको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुने ग्लोबल इन्फरमेसन प्रोभाइडर आईएचएस मार्किटले जनाएको छ ।
विश्वको ठूलो अर्थतन्त्रको देशको वरियतामा उकालो लाग्नाले विश्वव्यापी जीडीपीमा उसको योगदान पनि बढ्ने छ ।
भारतका कारण एसियाली क्षेत्रमा व्यापार तथा लगानी प्रवाह बढाउनमा सहयोग मिल्ने छ । मोदीको दोस्रो कार्यकालमा महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारको चुनौती जारी रहने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारी बैंकमा सुधार तथा एनपीएको बोझ कम गर्न नीतिमा प्राथमिकता दिइने छ ।
जीडीपीमा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतको तुलनामा केबल १८ प्रतिशत रहेको छ । आगामी २ दसकमा प्रत्येक वर्ष औसत करिब ७५ लाख रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ । यस कारण सरकारलाई म्यानुफ्याक्चरिङ तथा सेवा क्षेत्रमा रोजगारी बढाउने दबाब रहने छ । यो समाचार आजको कारोबार दैनिकमा लेखेको छ ।